LA OGAADAY: Imisa Milyan ayaa Xasan Sh uga baxday doorashada A/Hoose? – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
LA OGAADAY: Imisa Milyan ayaa Xasan Sh uga baxday doorashada A/Hoose?
Faah-faahinno dheeri ah ayaa kasoo baxaya lacagta madaxweyne Xasan Sheekh uga baxday xildhibaanada cusube ee Aqalka Hoose ee baarlamanka Soomaaliya, ee isaga taageersan.
Madaxweynaha ayaa lagu warramayaa in lacag ka badan shan milyan oo dollar uu ku bixiyey xildhibaano aad ugu dhow oo qaab musuq maasuq loogu soo saaray aqalka Hoose, xilli Soomaali badan ay abaar iyo gaajo u dhimanayaan.
Meelaha ay abaartu culus ee Soomaaliya ka jirto waxaa ka mid ah Galmudug, Puntland, Somaliland iyo deegaano kale, oo boqolaal Soomaali ah ay gaajo uga dhimanayaan, kuwaasi oo Xasan aanu soo hadal qaadin xitaa iska daa inuu gacan siiyee.
Ilo Wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya, in magaalada Jowhar ay madaxweynaha uga baxay hal milyan iyo bar dollar, taasi oo dheeri ku ah lacagta ay sidoo kale jeebkooda ka dhiibeen xubnaha lasoo doortay.
Waxa uu sidoo kale laba milyan iyo bar uu ku bixiyey doorashooyinka Cadaado, oo ay kusoo baxaan dad isaga aad ugu dhow, sida Mahad Salaad iyo agaasime ku xigeenka madaxtooyada Saadaq Cabdikariim. Waxaa sidoo kale jira xubno kale oo dhowr ah oo madaxweynaha uu kasoo saaray Cadaado.
Xasan ayaa sidoo kale xildhibaano dhowr ah ku lahaa xubnaha lagu soo doortay Kismaayo, halkaasi oo milyan dollar lacag ka badan ay uga baxday.
Waxaa yaab leh in lacagta Xasan uu sidan doorashada ugu bixinayo ay tahay lacagtii umadda Soomaaliyeed ay usoo dhiibeen dalalka deeqada bixiya iyo hay’adaha caalamiga ah.
Lacagtan waxaa sii dheer lacagta uu madaxweynaha qorsheeyey inuu ku iibsado codadka xildhibaanada baarlamanka Soomaaliya, marka ay dhaceyso doorashada, taasi oo lagu qiyaasay 20 milyan oo dollar.
Previous: XOG: MD Guuleed oo ku soo korortay hal arin oo ku qasbeysa inuu xilkiisa si deg deg ah ku wareejiyo..
Next: Guddiga Doorashooyinka Heer Maamul goboleed ee Galmudug oo Difaacay Kuraastii Musuqa Lagu Sheegay